Tigidhada Tareenka Xawaaraha Sare | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Central Anatolia06 AnkaraQiimaha Tikidhada Sare iyo Saacadaha Xawaaraha Sare-dheer
18 / 11 / 2013 06 Ankara, tareenka, GUUD, Tareenka dhakhso ah, Headline, TURKEY
tigidhada yht ee dadka naafada ah oo bilaash ah
Qiimaha Tigreega iyo Saacadaha Xawaarida Xawaaraha Sare: Tareen tareen ah oo u dhexeeya Eskisehir iyo Ankara oo ka shaqeynaya 16.35 ka soo jeeda Eskisehir ayaa la dhigey maxkamad bilo ah oo ah 1 oo ku taal Polatli. Haddii ay jiraan rakaab ku filan, waxaa jiri doona joogsi joogto ah.
Tareenka Tareenka: waxaa lagu wici karaa telefoon. Laakiin haddii aad ka fekereyso inaad ballansatid, waxaad u baahan tahay xubin. Waa lagama maarmaan in la buuxiyo foomka Internetka ee foomka Internetka ee foomka "Screen Record User" ee xubinimada xubinimada.
Xawaaladda Xawaaraha Sare: Shahaadada YHT oo dhan (Eskisehir iyo Konya) 385,00 TL, Da'da YHT Card 275,00 TL, Ankara-Polatlı 155,00 TL, YHT 130,00 TL, Eskisehir-Polatlı 180,00 TL, Young YHT 150,00 TL
444 82 maya, 33 XNUMX, waxaad heli kartaa tikidh tareenka xawaare sare leh adiga oo aan ku qorin lambarrada magaalada horteeda magaalooyinka oo idil.
- Riix batoonka "Login Login" ee shaashadda,
- Waxaad ku qortaa magaca isticmaalaha iyo erayga sirta "Screen Login Screen" iyo guji "ENTER"
- Riix badhanka Raadinta.
- Marka la eego shaashadda "Train Selections Menu", dooro taariikhda, Tareenka, Saldhigga, Xarunta Soo Galista, gali tirada rakaabka oo guji badhanka GO.
Tijaab ayaa loo sameeyey qaybta Polatlı-Afyon ee mashruuca, kaas oo lagu daray barnaamijka maal-galinta 2011. Saacadaha fog iyo waqtiga wadada iyadoo loo eegayo mashaariicda:
HAWLGALKA ISKUULKA ESKİŞEHİR - KONYA - ESKİŞEHİR
Xiriirinta Ankara ee 07.00 = Konya K: 09.15 Karaman V: 10.23
Xidhiidhka gaashaan ee Ankara 09.35 = Konya K: 12.05 Karaman V: 13.14
Xiriirinta Ankara ee 15.30 = Konya K: 17.30 Karaman V: 18.37
HAGAHA WAGON EE TABABARKA: Fasalka Ganacsiga, Fasalka Dhaqaalaha, Kafeega
Mashruuca Tareenka Xawaaraha Sare ee Ankara-İzmir, marxaladda koowaad ee qaybta Ankara-Afyonkarahisar ee hindisada. 28 ee Agaasimaha Guud ee TCDD December 2011 ee shirkadaha hindisada ayaa muujiyay xiiso weyn. Dalabka 38 ee shirkadda 26 ee iibsatay qeexitaanka. Hal bilyan oo xarig ah 660 million 549 kun oo 243 ah, dalabkii ugu hooseeyay ee mashruuca, taas oo u qalantay qandaraaska 714 million 432 kun oo 200 ah.
Mashruuca Tareenka Xawaaraha Sare (YHT), kaas oo yareyn doona xidhiidhka Ankara-İzmir ee saacadaha 3,5, ayaa la qorsheynayaa in uu ku shaqeeyo 2015. Buundada 13, biriijka 13 iyo buundada 189 ayaa lagu dhisi doonaa baaxadda mashruuca, halkaasoo xaruntii Ankara-Izmir YHT ay gaari doonto Afmirkarahisar. Mashruucan wuxuu yareeyn doonaa fogaanta fogaanta 824 ee u dhexeeya Ankara iyo Izmir ilaa 640. Xiriirka YHT ee Ankara-Izmir waxaa lagu dhisi doonaa laba xabbo iyo ugu yaraan xNUMX kilomitir. Xnumx't qorsheeyay in ay galaan mashruuca adeega, ayaa muhiimad weyn u dhaqaalaha Turkiga. Mashruucu waxaa la filayaa inuu shaqaaleysiiyo kunka kun ee 250. Hawlgalka qadka ee qadka, waqtiga kaydka iyo kaydka shidaalku waxay wax ku darsan doonaan dhaqaalaha ayaa heli doona sannadlaha 2015 Milyan. Qaybta Izmir-Afyonkarahisar ee qadka ayaa la qorsheynayaa in lagu soo bandhigo sanadka soo socda. Marka mashruuca la dhammeeyo, 4 waxaa la filayaa in ay sannad walba qaadaan malaayiin rakaab ah.
Tikidho Tareen ah
Ankarali ayaa ku soo qaaday khariidada madaarka
Shaqooyinka Extension Line Estram waa dhamaaday